January 2019 » Myanmar Family Life
ရုန်းလို့ မရအာင် (၃)ကြိမ်တိုင်တိုင် ဖက်အနမ်းခံလိုက်ရတဲ့ မြင့်မြတ်ရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေး
ပရိသတ်ကြီးရေ.. နာမည်ကျော်သရုပ်ဆောင်မင်းသားချော မြင့်မြတ်ကတော့ အနုပညာလမ်းကြောင်းမှာ ထိပ်တန်းကနေ အောင်မြင်မှုတွေရရှိထားသလို
ကလေးလူကြီး မိန်းကလေးပရိသတ် ယောင်္ကျားလေး ပရိသတ်မရွေး အားလုံးက အားပေးချစ်ခင်ကြရတဲ့ ပြည်သူချစ်အနုပညာရှင်တစ်ဦးပဲ ဖြစ်ပါတယ်..။
ပြည်သူပရိသတ်တွေအားလုံးရဲ့ အချစ်တွေကို သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ မြင့်မြတ်ဟာ အမိုက်စားသရုပ်ဆောင် ပိုင်နိုင်မှုတွေနဲ့ ပီပြင်ကျွမ်းကျင်မှုတွေကြောင့်
သဘာဝမင်းသားအဖြစ် ပရိသတ်တွေတင်စားထားရတဲ့ နာမည်ကျော် သရုပ်ဆောင်မင်းသားတစ်ဦးပါပဲ..။
ပရိသတ်တွေရဲ့ သည်းသည်းလှုပ်အချစ်ခံရတဲ့ မြင့်မြတ်ကတော့ VeVe ရဲ့ Brand Ambassador တစ်ဦးဖြစ်သလို VeVe Tour ရဲ့ ခရီးစဉ်တွေနဲ့ ခရီးတွေ ထွက်ရှိကာ ပရိသတ်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်..။
မြင့်မြတ်ကတော့ သူ့ကို အားပေးချစ်ခင်ကြတဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ကြိတ်ကြိတ်တိုးအားပေးမှုတွေကို ရရှိခဲ့ပြီး အမျိုးသမီးပရိသတ်အချို့ရဲ့ အနမ်းပေးခြင်းကိုပါ ရရှိခဲ့တာလည်း တွေ့ရပါတယ် ပြည်သူ့အသည်းကျော်မြင့်မြတ်ကတော့ (၃)ကြိမ်တိုင်တိုင် အနမ်းပေးခံလိုက်ရတာဖြစ်ပြီး ရုန်းလို့ မရလောက်အောင်ကို ဖက်ပြီး
အားရပါးရ အနမ်းခံလိုက်ရကာ အမိအရမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ အနမ်းပေးခံလိုက်ရတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကလည်း ပရိသတ်တွေကြား ကြည့်ရှု့သူများပြားနေတာ တွေ့ရပါတယ်..။
ပရိသတ်တွေ သဘောကျနေကြတဲ့ အနမ်းခံလိုက်ရတဲ့ မြင့်မြတ်ရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုလည်း Myanmarload ပရိသတ်တွေအတွက်လည်း ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်..။
ပရိသတျကွီးရေ.. နာမညျကြျောသရုပျဆောငျမငျးသားခြော မွငျ့မွတျကတော့ အနုပညာလမျးကွောငျးမှာ ထိပျတနျးကနေ အောငျမွငျမှုတှရေရှိထားသလို ကလေးလူကွီး မိနျးကလေးပရိသတျ ယောင်ျကြားလေး ပရိသတျမရှေး အားလုံးက အားပေးခဈြခငျကွရတဲ့ ပွညျသူခဈြအနုပညာရှငျတဈဦးပဲ ဖွဈပါတယျ..။
ပွညျသူပရိသတျတှအေားလုံးရဲ့ အခဈြတှကေို သိမျးပိုကျထားတဲ့ မွငျ့မွတျဟာ အမိုကျစားသရုပျဆောငျ ပိုငျနိုငျမှုတှနေဲ့ ပီပွငျကြှမျးကငျြမှုတှကွေောငျ့ သဘာဝမငျးသားအဖွဈ ပရိသတျတှတေငျစားထားရတဲ့ နာမညျကြျော သရုပျဆောငျမငျးသားတဈဦးပါပဲ ပရိသတျတှရေဲ့ သညျးသညျးလှုပျအခဈြခံရတဲ့ မွငျ့မွတျကတော့ VeVe ရဲ့ Brand Ambassador တဈဦးဖွဈသလို VeVe Tour ရဲ့
ခရီးစဉျတှနေဲ့ ခရီးတှေ ထှကျရှိကာ ပရိသတျတှနေဲ့ တှဆေုံ့ခဲ့တာ တှရေ့ပါတယျ မွငျ့မွတျကတော့ သူ့ကို အားပေးခဈြခငျကွတဲ့ ပရိသတျတှရေဲ့ ကွိတျကွိတျတိုးအားပေးမှုတှကေို ရရှိခဲ့ပွီး အမြိုးသမီးပရိသတျအခြို့ရဲ့ အနမျးပေးခွငျးကိုပါ ရရှိခဲ့တာလညျး တှရေ့ပါတယျ..။
ပွညျသူ့အသညျးကြျောမွငျ့မွတျကတော့ (၃)ကွိမျတိုငျတိုငျ အနမျးပေးခံလိုကျရတာဖွဈပွီး ရုနျးလို့ မရလောကျအောငျကို ဖကျပွီး အားရပါးရ အနမျးခံလိုကျရကာ အမိအရမှတျတမျးတငျထားတဲ့ အနမျးပေးခံလိုကျရတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုငျလေးကလညျး ပရိသတျတှကွေား ကွညျ့ရှု့သူမြားပွားနတော တှရေ့ပါတယျ ပရိသတျတှေ သဘောကနြကွေတဲ့ အနမျးခံလိုကျရတဲ့ မွငျ့မွတျရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုငျလေးကိုလညျး Myanmarload ပရိသတျတှအေတှကျလညျး ပွနျလညျမြှဝပေေးလိုကျပါတယျနျော..။
အကြမ်းစားပုံတစ်ချို့ကို ပရိတ်သတ်တွေကိုချပြလိုက်တဲ့ နန်းခင်ဇေယျာ
မော်ဒယ်သရုပ်ဆောင်မင်းသမီးချောလေး နန်းခင်ဇေယျာဟာ ပရိတ်သတ်တွေချစ်ကြတဲ့ Miss တစ်ဦး ပါ။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဂုဏ်ဆောင် အလှမယ်ဟောင်း တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ နန်းခင်ဇေယျာဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အလှမယ်လောကကို ပထမဆုံး နိုင်ငံကတာသွားရောက်ကြိုးစားပေးခဲ့တဲ့ ပထမဆုံး အလှမယ် တစ်ဦးလို့ ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။
မကြာသေးမီကလည်း ခွဲစိတ်ပြုပြင်မှုတစ်ချို့ကို မျက်နှာမှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ပိုမိုဆွဲဆောင်မှုရှိကာ လှပလာတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။မျက်နှာလှလှလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားရုံသာမက အမိုက်စားခန္ဓာကိုယ်လှလှလေးကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားပါသေးတယ်။ နန်းခင်ဇေယျာရဲ့ Instagram ထက်မှ ပရိတ်သတ်တွေအတွက် စွဲမက်လောက်တဲ့ပုံရိပ်တစ်ချို့ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်…
စက်ပစ္စည်းတွေအရမ်းကိုတိုးတက်လာတဲ့ခုခေတ်ကြီှးမှာ လူတွေရဲ့ စိတ်ခံစားချက်တွေကလည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲတဲ့ ခေတ်ရေစီးကြောင်းကြီးထဲ ရှောင်လွှဲမရစွာပဲမျောပါနေခဲ့ဟန်တူပါတယ်။ ယောက်ျားလေးတွေရဲ့ဆန်းပြားတဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေဟာ ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေကတည်းက ရှိခဲ့တာဆိုပေမယ့် အရင်ခေတ်တွေတုန်းကတော့ သိုသိုသိပ်သိပ်သာရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပြီး သိပ်မကြာခင် ဆယ်စုနှစ်တွေကမှ သာမန်မဟုတ်တဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေဟာ ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ဖြစ်တည်ခွင့်ရခဲ့တာပါ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအခုတလောမှာ ယောက်ျားလေးတွေရဲ့ အချင်းချင်းသာမန်မဟုတ်တဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေသိပ်ကိုခေတ်စားပေါများလာမှုကြောင့် အစစ်မတွေနေဝင်ချိန်လို့ပြောကြရလောက်တဲ့အထိကို မိန်းကလေးအစစ်တွေမှာ အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံစိတ်ဒုက္ခတွေရောက်ခဲ့ရ၊ရောက်နေရဆဲပါပဲ။ လူတိုင်းမှာ လွပ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ရှိပေမယ့် ကိုယ့်ရဲ့လွပ်လပ်ခွင့်ကိုလိုချင်တာကြောင့်တော့ ကိုယ်နဲ့နှစ်ရှည်လများပတ်သက်လာခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးကိုအရှက်တကွဲအကျိုးနည်းအောင်မလုပ်သင့်တာအမှန်ပါ။
ဟိုတလောကလည်းလက်ထပ်ဖို့အကုန်ပြင်ဆင်ပြီးကာမှ ယောက်ျားလေးရဲ့စိတ်ခံစားချက်က မျိုးတူကိုသာတိမ်းညွှတ်တယ်မှန်း အထင်းသားပေါ်ထွက်လာတာကြောင့် မျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက်ဖြစ်ရတဲ့ မိန်းကလေးရဲ့သတင်းကိုဖတ်လိုက်ရပါသေးတယ်။ အခုလည်းပဲဆန်းပြားတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြန်ပါပြီ။
အဲ့ဒါကတော့ယောက်ျားလေးနှစ်ဦးလိုို့ဆိုရမယ့် လက်ထပ်မင်္ဂလာပွဲပါပဲ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီနေ့ခေတ်ကြီးမှာ ယောက်ျားလေးအချင်းချင်းလက်ထပ်တာဟာ သတင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်နိုင်တော့တဲ့ခေတ်မဟုတ်ပေမယ့်လည်း ဒီသတင်းကတော့ ထူးခြားတယ်လို့ဆိုရမှာပါ။ အကြောင်းကတော့ ယောက်ျားလေးနှစ်ဦးရဲ့လက်ထပ်ပွဲဟာ ယောက်ျားလေးအချင်းချင်းမဟုတ်ပဲမိန်းကလေးနဲ့ယောက်ျားလေးရဲ့လက်ထပ်မင်္ဂလာပွဲဖြစ်ကြောင်းပေါ်ထွက်လာခဲ့လို့ပါပဲ။ ဖတ်ရတာမျက်စိရှုပ်သွားပြီထင်ပါတယ်။
အင်တာနက်ပေါ်ဓာတ်ပုံတွေတက်လာခါစမှာ အနောက်မှာရေးထားတဲ့သတို့သားနဲ့သတို့သမီးတို့ရဲ့နာမည်တွေကယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးရဲ့နာမည်တွေဖြစ်နေခဲ့တာကြောင့် လူအများစုက သူများမင်္ဂလာပွဲမှာ သတို့သားအရံလုပ်ပေးတဲ့သူတွေကို ဓာတ်ပုံတင်ပြီးဖွတာလို့ထင်ခဲ့ကြပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ သတို့သမီးဟာ ယောက်ျားစိတ်ပေါက်နေတဲ့မိန်းကလေးဖြစ်တာကြောင့် ယောက်ျားလိုဝတ်ပြီး မင်္ဂလာဆောင်တာဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်ရချိန်မှာတော့ အကုန်လုံးက စဉ်းစားရခက်ပြီးငိုရမလိုရယ်ရမလိုတွေဖြစ်ကုန်ပါသေးတယ်။
သတို့သားဖြစ်သူဟာယောက်ျားလေးဖြစ်ပေမယ့် ယောက်ျားလေးအချင်းချင်းနှစ်သက်စိတ်ဝင်နေပြီး Uke ဖြစ်နေသူပါ။ မိန်းကလေးကတော့ စောစောကပြောခဲ့သလိုပဲယောက်ျားလျာစိတ်ပေါက်နေတဲ့မိန်းကလေးပါ။ သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ဖူးစာကတကယ်ကိုအံ့သြစရာပါပဲ။ Uke နဲ့ Tomboy လေးတော့ လက်ထပ်ပြီးဘယ်လိုစခန်းသွားကြမလဲဆိုတာစိတ်ဝင်စားပြီး comment တွေမှာပြောဆိုနေကြသူတွေက ဒုနဲ့ဒေးရှိနေပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် လက်ထပ်ပြီးအတူပျော်ရွှင်စွာနေနိုင်ဖို့ကသာအဓိကလို့ပြောဆိုနေကြသူတွေလည်းရှိလေရဲ့။
စကျပစ်စညျးတှအေရမျးကိုတိုးတကျလာတဲ့ခုခတျေကွီှးမှာ လူတှရေဲ့ စိတျခံစားခကျြတှကေလညျးတိုးတကျပွောငျးလဲတဲ့ ခတျေရစေီးကွောငျးကွီးထဲ ရှောငျလှဲမရစှာပဲမြောပါနခေဲ့ဟနျတူပါတယျ။ ယောကျြားလေးတှရေဲ့ဆနျးပွားတဲ့စိတျခံစားမှုတှဟော ဟိုးလှနျခဲ့တဲ့နှဈတှကေတညျးက ရှိခဲ့တာဆိုပမေယျ့ အရငျခတျေတှတေုနျးကတော့ သိုသိုသိပျသိပျသာရှိနခေဲ့တာဖွဈပွီး သိပျမကွာခငျ ဆယျစုနှဈတှကေမှ သာမနျမဟုတျတဲ့စိတျခံစားခကျြတှဟော ပျေါပျေါထငျထငျဖွဈတညျခှငျ့ရခဲ့တာပါ။
မွနျမာနိုငျငံမှာလညျးအခုတလောမှာ ယောကျြားလေးတှရေဲ့ အခငျြးခငျြးသာမနျမဟုတျတဲ့စိတျခံစားခကျြတှသေိပျကိုခတျေစားပေါမြားလာမှုကွောငျ့ အစဈမတှနေဝေငျခြိနျလို့ပွောကွရလောကျတဲ့အထိကို မိနျးကလေးအစဈတှမှော အမြိုးမြိုးအဖုံဖုံစိတျဒုက်ခတှရေောကျခဲ့ရ၊ရောကျနရေဆဲပါပဲ။ လူတိုငျးမှာ လှပျလပျစှာရှေးခယျြခှငျ့ရှိပမေယျ့ ကိုယျ့ရဲ့လှပျလပျခှငျ့ကိုလိုခငျြတာကွောငျ့တော့ ကိုယျနဲ့နှဈရှညျလမြားပတျသကျလာခဲ့တဲ့အမြိုးသမီးကိုအရှကျတကှဲအကြိုးနညျးအောငျမလုပျသငျ့တာအမှနျပါ။
ဟိုတလောကလညျးလကျထပျဖို့အကုနျပွငျဆငျပွီးကာမှ ယောကျြားလေးရဲ့စိတျခံစားခကျြက မြိုးတူကိုသာတိမျးညှတျတယျမှနျး အထငျးသားပျေါထှကျလာတာကွောငျ့ မကျြရညျနဲ့မကျြခှကျဖွဈရတဲ့ မိနျးကလေးရဲ့သတငျးကိုဖတျလိုကျရပါသေးတယျ။ အခုလညျးပဲဆနျးပွားတဲ့သတငျးတဈပုဒျပျေါထှကျလာခဲ့ပွနျပါပွီ။
အဲ့ဒါကတော့ယောကျြားလေးနှဈဦးလိုိ့ဆိုရမယျ့ လကျထပျမင်ျဂလာပှဲပါပဲ။ဟုတျပါတယျ။ဒီနခေ့တျေကွီးမှာ ယောကျြားလေးအခငျြးခငျြးလကျထပျတာဟာ သတငျးတဈပုဒျဖွဈနိုငျတော့တဲ့ခတျေမဟုတျပမေယျ့လညျး ဒီသတငျးကတော့ ထူးခွားတယျလို့ဆိုရမှာပါ။ အကွောငျးကတော့ ယောကျြားလေးနှဈဦးရဲ့လကျထပျပှဲဟာ ယောကျြားလေးအခငျြးခငျြးမဟုတျပဲမိနျးကလေးနဲ့ယောကျြားလေးရဲ့လကျထပျမင်ျဂလာပှဲဖွဈကွောငျးပျေါထှကျလာခဲ့လို့ပါပဲ။ ဖတျရတာမကျြစိရှုပျသှားပွီထငျပါတယျ။
အငျတာနကျပျေါဓာတျပုံတှတေကျလာခါစမှာ အနောကျမှာရေးထားတဲ့သတို့သားနဲ့သတို့သမီးတို့ရဲ့နာမညျတှကေယောကျြားလေးနဲ့မိနျးကလေးရဲ့နာမညျတှဖွေဈနခေဲ့တာကွောငျ့ လူအမြားစုက သူမြားမင်ျဂလာပှဲမှာ သတို့သားအရံလုပျပေးတဲ့သူတှကေို ဓာတျပုံတငျပွီးဖှတာလို့ထငျခဲ့ကွပမေယျ့ နောကျပိုငျးမှာ သတို့သမီးဟာ ယောကျြားစိတျပေါကျနတေဲ့မိနျးကလေးဖွဈတာကွောငျ့ ယောကျြားလိုဝတျပွီး မင်ျဂလာဆောငျတာဖွဈကွောငျးသိလိုကျရခြိနျမှာတော့ အကုနျလုံးက စဉျးစားရခကျပွီးငိုရမလိုရယျရမလိုတှဖွေဈကုနျပါသေးတယျ။
သတို့သားဖွဈသူဟာယောကျြားလေးဖွဈပမေယျ့ ယောကျြားလေးအခငျြးခငျြးနှဈသကျစိတျဝငျနပွေီး Uke ဖွဈနသေူပါ။ မိနျးကလေးကတော့ စောစောကပွောခဲ့သလိုပဲယောကျြားလြာစိတျပေါကျနတေဲ့မိနျးကလေးပါ။ သူတို့နှဈဦးရဲ့ဖူးစာကတကယျကိုအံ့သွစရာပါပဲ။ Uke နဲ့ Tomboy လေးတော့ လကျထပျပွီးဘယျလိုစခနျးသှားကွမလဲဆိုတာစိတျဝငျစားပွီး comment တှမှောပွောဆိုနကွေသူတှကေ ဒုနဲ့ဒေးရှိနပေါတယျ။ ဘယျလိုပဲဖွဈဖွဈ လကျထပျပွီးအတူပြျောရှငျစှာနနေိုငျဖို့ကသာအဓိကလို့ပွောဆိုနကွေသူတှလေညျးရှိလရေဲ့။
ခုတလော ဘန်ကောက်တော်ဝင်ဆေးရုံကိုမြန်မာပြည်တွင်းမှ ပြည်သူများရွေးချယ်ပြီးသွားရောက်ကုသရသောအကြောင်းရင်း
ခုတလော ဆေးကုသမှုခံယူရာမှာဘန်ကောက်တော်ဝင်ဆေးရုံကိုမြန်မာပြည်တွင်းမှ ပြည်သူများရွေးချယ်ပြီးသွားရောက်ကုသရသောအကြောင်းရင်း ။
ကျတော်အစကအဖေရဲ့ရောဂါကို မြန်မာပြည်မှာကုသဖို့စဉ်းစားဖူးတယ် ကုလဲကုခဲ့ဖူးတယ် အကြိမ်ပေါင်းမရေတွက်အောင် ဆေးရုံမှာသွားကုခိုင်းဖူးတယ်။
အဖေကတီဘီဆေးကိုးလသောက်ဖူးတယ်။လည်ပင်းမှာအကျိတ်ကထွက်တယ် ကျောက်ကပ်မှာကျောက်တည်တယ် ။အစိုးရဆေးရုံလဲပြသတယ် လည်ပင်းကအကျိတ်ကိုခွဲတယ် မကြာဘူး ။
နောက်တစ်နေရာထပ်ထွက်တယ် ကိုယ်ကလဲစိုးရိမ်လို့ ရန်ကုန်လာစေပြီး အကောင်းဆုံးပုဂ္ဂလိကဆေးရုံပြတယ်။အဲဒီပြတဲ့နေ့မှာ ဆရာဝန်နဲ့တွေ့ရဖို့ အချိန်နှစ်နာရီမကစောင့်ရတယ် မနေနိင်လို့ information ကသူနာပြုကိုမေးတယ်။
မကြည်မသာမျက်နာနဲ့ နံပါတ်မရောက်သေးတဲ့အကြောင်းပြောတယ် ။ကိုယ့်အလှည့်ရောက်တော့အဲဒီဆရာဝန်အခန်းထဲအဖေနဲ့လိုက်ဝင်တယ် သမားတော်ကြီးဆိုတဲ့ဆရာဝန်အဖေအခြေနေဖိုင်ကိုစစ် ဟိုမေးဒီမေးနဲ့ နောက်တစ်ပါတ်ချိန်းတယ်။
(စကားပြောတာ ၅ မိနစ်တောင်ကြာမယ်မထင်ဘူး) ကိုယ်ကအဖေနဲ့နယ်ကလာတဲ့အကြောင်း ကျတော်ကိုယ်တိုင်လဲအလုပ်ကိစ္စရှိလို့ မနက်ဖြန်ချိန်းဖို့တောင်းဆိုတယ် မရဘူးဆိုတော့ မတတ်နိင်ဘူး အလုပ်ခွင့်ထပ်ယူလိုက်ရတယ်
နောက်ပတ်ရက်ချိန်းမှာ အဖေကိုဓာတ်မှန်တွေရိုက် သွေးစစ်နဲ့ အဖေလည်ပင်းကအကျိတ်ကို မနက်ဖြန်ခွဲမယ်ဆိုပြီး နောက်နေ့ချိန်းပါတယ် အကျိတ်ခွဲပြီးလို့ အဖေကျောက်ကပ်အခြေနေကိုစစ်တယ် ကျောက်ကပ်မကောင်းဘူး လဲရင်လဲ မလဲရင် ခွဲဖို့ပြောတယ်။
အဆိုးဆုံးက ခန့်မှန်းသလောက် အဖေဆီးအိမ်ကင်ဆာဖြစ်နိင်တယ်လို့ဆိုတယ်။ကျတော်ကလဲ အဖေအကျိတ်ခွဲထားတာရက်ပိုင်းပဲမို့တစ်ပါတ်လောက်အနားယူပြီးမှ အူလမ်းကျောင်းမခွဲလိုသေးတဲ့အကြောင်းပြောတော့…
“မင်းကဆရာဝန်လား ငါကဆရာဝန်လား” ဆိုပြီးပြောလေရော US ကကျတော့်သူငယ်ချင်းဆရာဝန်က အဖေရဲ့ ct အဖြေလွှာကိုကြည့်ချင်လို့ ပြောထားတော့ ကျတော်အဲဒီဆရာဝန်ဝန်ကို အဖေရဲ့ ct တောင်းတော့ပိုဆိုး မျက်ထောင့်နီနဲ့မဟောက်ရုံတမယ် ထားလိုက် သည်းခံလိုက်တယ် ။
ကုန်ကျမူ့တော့ စုစုပေါင်း ၈ သိန်းကျော် ကျောက်ကပ်မကုရသေးဘူး။ခွဲထားတဲ့အကျိတ်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့အဖေကိုလာပို့တယ် ။
သူနာပြုအခန်းရှေ့မှာဝါဂွင်းအသစ်သွင်းနေတာမြင်ရပေမယ့် ဦးလေးနာလား မနာဘူးလား တချက်မှမမေး တာဝန်တခုလိုဂွမ်းတွေသွင်းနေတာသက်မဲ့ကျောက်ရုပ်အတိုင်း ပြီးလဲပီးရော သူနာပြုမလေးကထွက်လို့ရပြီဆိုတဲ့စကားတခွန်းပဲပြောတယ်။
ကိုယ်တိုင်မြင်နေရတော့စိတ်ထဲမကောင်း တပါတ်လောက်ကြာတော့ အဖေကိုကျောက်ကပ်ကိစ္စဖုန်းဆက်လာတယ် အဖေလည်ပင်းကအကျိတ်ကလဲရောင်နေတုန်း ကျတော်စဉ်းစားရပြီ အဲဒါနဲ့ ရှမ်းပြည်တချက်ပြန်လာတဲ့အကြောင်းပဲပြောလိုက်တယ်။
ကျတော်အဖေနဲ့အတူ ဘန်ကောက်လေယာဉ်လက်မှတ်ဖြတ်လိုက်တယ် Silon မှာနေတဲ့မိတ်ဆွေအကူညီနဲ့ အနီးနားဆုံးဆေးရုံး Chulalongkorn hospital (အစိုးရဆေးရုံ )အဖေကိုခေါ်သွားတယ်။
Passport ပြပြီးဆေးရုံကဒ်လုပ်တယ် ကဒ်ရဖို့စောင့်ယူနေတဲ့ချိန် သူနာပြုတွေကဝှီးချဲနဲ့အဖေကို သွေးစစ်ဖို့ ဆီးစစ်ဖို့ လေးထပ်မှာရှိနေမယ့်အကြောင်း …
ကျတော်ကဒ်ရလို့လိုက်သွားတော့ အဖေကဆေးရုံဝတ်စုံနဲ့ဝှီးချဲပေါ်ကနေ သွေးနဲ့ ဆီးတောင် စစ်ပြီးလို့ စောင့်နေပြီ ၃၀ မိနစ်လောက်ကြာတော့ ကျတော့်နာမည်နဲ့အဖေနာမည်ခေါ်ပြီး ဆရာဝန်အခန်းဝင်ရတယ်။
ဝင်ဝင်ချင်း ဆဝဒ်ဒီခပ် (မင်္ဂလာပါ) ဆိုပြီး အရိုသေဆုံးရှိခိုးပြီးပြုံးပြုံးလေးနှုတ်ဆက်တယ် ခုနကစစ်ထားတဲ့သွေးနဲ့ဆီးအဖြေက ဆရာဝန် computer ထဲ online system နဲ့အသင့်ရှိနေပြီ ကျတော်ကလဲအဖေလည်ပင်းကအကျိတ်အခြေနေပြောတယ် ။
ပထမအကျိတ်နေရာက အသားမာ နဲ့ အမာရွက်ဖြစ်နေသလို ရန်ကုန်ကခွဲထားတဲ့အကျိတ်နေရာမှာလဲ တစ်လက်မဝန်းကျင် မကျက်တကျက် ဆရာဝန်စစ်ကြည့် သူနာပြုခေါ်လိုက်ပြီး ၁၄ ထပ်ပို့ပေးတယ်။
အဲဒီမှာ နောက်တယောက်ဆရာဝန်က ရန်ကုန်ကဆေးစာရွက်တောင်းတော့ ရန်ကုန်ကဆရာဝန်မပေးလာတဲ့အကြောင်း ကိုယ့်ဖာသာလာကုတဲ့အကြောင်းပြောတော့ ရပါတယ်တဲ့ ။
အဲဒါနဲ့အဖေလည်မင်းကို scan ရိုက် သေသေချာချာပြန်စစ်ပြီး အကျိတ်ထပ်ခွဲဖို့ပြင်ဆင်တယ် ရန်ကုန်ကခွဲလာတဲ့နေရာနဲ့ နောက်အဖုထွက်လာဆဲနေရာ ၂ နေရာခွဲတယ် ။
အသစ်ခွဲပေးတဲ့နေရာက 4cm လောက်ပါပဲ အဟောင်းနေရာမှာတော့ ခွဲထားတာအမြစ်မကုန်သေးတဲ့အကြောင်းပြောတယ် ကြာချိန် တစ်နာရီ မပြည့်ပါဘူး။ကျောက်ကပ်ဆရာဝန်ဆီသူနာပြုပြန်လာပို့တယ် အဖေကို ဒီညဒီမှာထားပေးလို့ရလားမေးတယ် ။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ မနက်ဖြန် ၉ နာရီမှာအဖေကျောက်ကပ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းအတွက် အမ်ထရာဆောင်း စစ်ဖို့က အစားစာ ၁၂ နာရီထိန်းချုပ်ရမယ်ဆိုတော့ အဖေကိုဆေးရုံမှာပဲအခန်းတစ်ခန်းစီစဉ်ပေးလိုက်တယ်။
နောက်နေ့ ကျတော် ဆယ်နာရီခွဲဆေးရုံရောက်တော့ အဖေက xray တောင်ပြီးနေပြီ သူတို့ဆရာဝန်သုံးလေးယောက်ထင်တယ် အချင်းချင်းတိုင်ပင်ပြီးကျောက်ကို လေဆာနဲ့ပစ်ဖို့ကျတော့်ကိုပြောတယ်။
စောင့်ချင်ရသလို ကိစ္စရှိမယ်ဆိုရင်လဲ ညနေ ၅ နာရီအဖေကိုလာကြိုပေးနိုင်တဲ့ပြောတယ်။ကျတော်လဲစောင့်နိင်တဲ့အကြောင်း ပြောပြီးအဖေအတွက်ယူထားတဲ့အခန်းမှာအနားယူနေလိုက်တယ်။
၅ နာရီထိုးတော့သူနာပြုလာခေါ်ပြီး ကုန်ကျမူ့အတွက် အဖေအတွက်လိုအပ်မယ့်သောက်ဆေးအတွက်စီစဉ်ပြီး ဆရာဝန်ကိုနှုတ်ဆက်တယ် ။မနက်ဖြန်အဖေလည်ပင်းတချက်သန့်ရှင်းရေးလာလုပ်ပေးပြီးရင် မြန်မာပြည်ပြန်လို့ရပြီဆိုပြီး ဆရာဝန်ကပြုံးပြုံးချိုချိုနဲ့နှုတ်ဆက်တယ်။
နောက်နေ့အဖေလည်ပင်းကခွဲထားတဲ့အနာကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့သွားပို့တယ် ။သူနာပြုတစ်ယောက်က ချက်ချင်းကြိုဆိုတယ် ။အနွေးထွေးဆုံးနဲ့ ဂရုတစိုက်ပြုံးပြပြီး သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးနေတာ သမီးတယောက်က ကိုယ့်အဖေကိုပြုစုနေတဲ့အတိုင်း….
ကုန်ကျမူ့စုစုပေါင်းအဖေအတွက်လူနာကဒ် 50 baht ၊
သွေးစစ် ဆီးစစ် 350 baht ၊ အကျိတ်ခွဲ 300×2=700 baht ၊
အကျိတ်သန့်ရှင်းရေး2time 100 baht
ကိုယ်တိုင်သန့်ရှင်းဖို့ ဂွမ်းအရက်ပြန် ပါတ်တီး 150 baht
ဆေးရုံမှာအဖေအိပ်ခ VIP room 1,500 baht
အမ်ထရာဆောင်းရိုက်ခ 1300 baht
ကျောက်လေဆာပစ် 3,200 baht
တစ်လစာသောက်ဆေး 850 baht
Service 300 baht
Total 8,200မြန်မာကျပ်ငွေနဲ့ သုံးသိန်းခွဲတောင်မကုန် လေယာဉ်ခနဲ့အပါ ၅ သိန်းထားလိုက်…
အပြန်လေဆိပ်မှာ အတူပြန်တဲ့သူကိုသတိထားတော့ ထက်ဝက်လောက်က သက်လက်ပိုင်းအရွယ် ထက်ဝက်လောက်က ဆေးလာကုကြတဲ့သူတွေ…
စကားကြုံလို့ဘေးနားကအန်တီနဲ့စကားပြောကြည့်တယ်ရန်ကုန်ပုဂ္ဂလိဂဆေးရုံမှာ နှလုံးကုတာ တစ်နစ်ကျော်ကြာခဲ့ပြီ သိန်းရာနဲ့ချီကုန်ခဲ့ပြီ မထူးလို့ဆိုပြီး ထိုင်းမှာလာကုတာ baht 40000 ကျော်ပဲကုန်တယ်ပြောတယ်။
မြန်မာငွေနဲ့တွက်နဲ့ ဆယ်သိန်းနဲနဲပဲကျော်တယ်။့မြန်မာပြည်ကဆရာဝန်တွေကအကျိတ် သိုမဟုတ် တစ်ခုခုခွဲရင် အမာရွတ်ကျန်နေအောင် ရုပ်ဆိုးအကျည်းတန်အောင်ဖြစ်သလိုခွဲတယ်။
ထိုင်းကဆရာဝန်က တစ်ခုခုခွဲစိတ်ရင် အတတ်နျင်ဆုံးအမာရွက်မကျန်အောင် ခွဲတယ်။မြန်မာပြည်က ကျောက်ကပ်အတွက်ခွဲဖို့ပြောတယ် (အဲဒါတစ်လလောက်သောင်တင်နေရအုံးမယ်)
ထိုင်းကဆရာဝန်က ကျောက်ကိုလေဆာနဲ့ပစ်တယ် သုံးနာရီကြာတယ်။မြန်မာပြည်ကအတော်ဆုံးလို့သူ့ကိုယ်သူမှတ်ယူထားတဲ့သမားတော်ဆိုသူက ကျတော့်အဖေကို ကင်ဆာဖြစ်နိင်တဲ့အလားလာတွေ့နေတယ်ဆိုပြီး ထွက်ချက်ဆိုတယ်။
ထိုင်းကဆရာဝန်က ကျတော့်အဖေကိုအကုန်စစ်ကြည့်လို့ သူတို့ lab မှာသုံးနာရီထဲနဲ့ ကျတော့်အဖေမှာကင်ဆာမဖြစ်ဘူးဆိုတာ အာမခံချက်နဲ့ ပြောတယ်။
မြန်မာပြည်ကဆရာဝန်က ရောဂါကိုဘယ်လိုကုရမယ်ဆိုတာသူတယောက်တည်းဆုံးဖြတ်တယ် လူနာရှင်ဖက်က သိချင်လို့မေးခဲ့ရင် ဟောက်တယ်။
ထိုင်းကဆရာဝန်တွေက ချက်ချင်းရောဂါကိုအမြန်ဆုံးရနိင်သလောက်ရအောင်ရှာတယ် သူတို့အချင်းချင်းတိုင်ပင်တယ်။
သူတို့ကိုယ်တိုင်သေချာအဖြေမရှာနိင်ရင် တစ်ခြားဆေးရုံကဆရာဝန်ဖြစ်ဖြစ် အကြံညဏ်ချက်ချင်းယူတယ်။လူနာရှင်ကိုရိုသေလေးစားစွာနဲ့အားပေးတယ် ဖော်ဖော်ရွေရွေပြုံး ပြတယ်။
မြန်မာပြည်ကသူနာပြုက လူနာကိုမျက်နာတည်တည်နဲ့ မေးထူးခေါ်ပြောလောက်ပဲဆက်ဆံတယ်
ထိုင်းကသူနာပြုက လူနာကိုကိုယ့်ကျေးဇူးရှင်လို စေတနာပါပါပြုံးပြီးလေးလေးစားစားဆက်ဆံတယ် ဂရုစိုက်တယ်
မြန်မာပြည်ကဆရာဝန်က တကြိမ်ပြပြီးရင် တစ်ပတ်ဖြစ်ဖြစ် တစ်လဖြစ်ဖြစ်ရက်ချိန်းတယ်
မြန်မာပြည်ကဆရာဝန်က လူနာရှင်ကို မင်း, ငါ,ခင်ဗျား,ကျုပ် ဆိုပြီး ရိုင်းပျပျဆက်ဆံတယ်
ထိုင်းကဆရာဝန်က လူနာရှင်ကို ”ခွန်း,ခပ်,ခါ ”
မြန်မာလို ”လူကြီးမင်း ခင်ဗျား,ဗျာ,ရှင့် ”ဆိုပြီး ရိုရိုသေသေဆက်ဆံတယ်
မြန်မာပြည်ကဆရာဝန်က ရောဂါအခြေနေကိုလူနာရှင်ကိုတိတိကျကျမပြောပဲ ငါသာအတော်ဆုံး ငါအသိဆုံးဆိုပြီး ရမ်းသမ်းပြီးဖြစ်သလိုကု ကုန်ကျမူ့ကိုအဆမတန်တောင်းတယ်။
ထိုင်းကဆရာဝန်က ရောဂါကိုနာရီပိုင်းနဲ့ရအောင်စစ်ပြီး လူနာရှင်ကို ဘယ်လိုကုသင့်တယ် ကုန်ကျမူ့ကဘယ်လောက်ရှိမယ်ဆိုတာကို သူတို့နိင်ငံကသတ်မှတ်တဲ့နှုန်းထားအတိုင်း အရင်နားလည်အောင်ရှင်းပြတယ်။
ကုန်ကျမူ့လား …. မြန်မာပြည်ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံမှာကုတာထက် ထိုင်းမှာကုတာ ကုန်ကျမူ့နည်းတယ်
မြန်မာပြည်ကဆေးရုံမှာ မမြင်ရတဲ့အပြုံး နဲ့ နွေးထွေးမူ့
ထိုင်းကဆေးရုံးမှာအမြဲလိုတွေ့နေရတော့ ကိုယ်တောင်လူနာရှင်ကိုစိတ်ပူနေတဲ့ကြား သူတို့ကိုပြန်ပြုံးပြဖို့ ဟန်ဆောင်ပြုံးလုပ်ယူရတဲ့အထိ သူနာပြုတွေ ဆရာဝန်တွေ ကိုယ့်ကိုယ်ရှိခိုးတိုင်း သူတို့ကိုအားနာနေရတဲ့အထိ….
ဆေးရုံသန့်ပြန့်မူ့လား ….ကျတော်တည်းတဲ့ Lilon မှာ အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့ Chulalongkorn hospital ထိုင်းအစိုးရဆေးရုံဆိုပေမယ့် နေရာတိုင်း အထပ်တိုင်း လေအေးပေးစက် ဓာတ်လှေကား ထိုင်ခုံအစ toilet အဆုံး မြန်မာပြည်က five star hotel ထက်ပိုသန့်ရှင်းတယ်။
အဲဒီဆေးရုံကိုပြဖို့ မခက်ပါဘူး တခြားထိုင်းကပုဂ္ဂလိကဆေးရုံလိုဆရာဝန်ခေါ်စာလဲမလိုပါဘူး။
ထိုင်းတော်ဝင်ပိုင်ဆေးရုံ ထိုင်းအစိုးရပိုင်ဆေးရုံတိုင်းမည်သည့်နိင်ငံသားမဆို ဆေးကုသခွင့်ရှိပါတယ်။
ထိုင်းပုဂ္ဂလိကဆေးရုံထက် ဆေးကုသခ ကုန်ကျမူ့နှုန်း အလွန်သက်သာပေမယ့် ကုသခြင်းစံချိန်စံညွန်းကတော့ အတူတူပါပဲ ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံမှာကုသတဲ့ဆရာဝန်အများစုကလဲ chulalongkorn ဆေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းဆင်းတွေများပါတယ်။
1. ရန်ကုန်နေဘန်ကောက်ကို passport နဲ့အလည်ဗီဇာ လေယာဉ်လက်မှတ်ဖြတ်လိုက်ပါ
အခုဆို passport လုပ်တာအင်မတန်လွယ်သလို ကုန်ကျမူ့လဲဘာမှမကုန်တော့ပါဘူး ခန့်မှန်းခြေ သုံးသောင်းကျပ်နဲ့ ၂ ရက်လောက်ဆိုရပါပြီ
Nok air,Thai lion,AirAsia လေယာဉ်လက်မှတ်ကလဲYgn > Bkk > Ygn အသွားပြန်မှ 80$ to 100$ ပဲကျပါတယ် ( အသွားပြန်ကျပ်ငွေတစ်သိန်းဝန်းကျင်)
မြန်မာပြည်ကပြည်တွင်းလေယာဉ်လက်မှတ်ထက် ထက်ဝက်ကျော်လဲသက်သာပါသေးတယ် မယုံရင်ရန်ကုန် မြစ်ကြီးနားခရီးစဉ် နဲ့ ရန်ကုန် ဘန်ကောက် ခရီးစဉ်လေယာဉ်ခကို နိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ
2.. Bkk Dongmoung airport ရောက်ရင် ဒုတိယထပ်က A1 or A2 airport bus စီးပါ မစီးတတ်ရင် airport information မေးပါ (မရှက်ပါနဲ့) Jathujak ပန်းခြံမှာဆင်းပါ ကားခက baht 30 ပဲပေးရပါတယ်
3..Jakthujak ရောက်ရင် Underground train or BTS sky train စီးပါ မြေအောက်ရထားရောမိုးပျံရထားရောစီးလို့ရပါတယ်။
ရထားလက်မှတ်မဝယ်တတ်ရင် ticket counter မှာ silon station သွားမယ်လို့ပြောပါ ။
မိုးပျံရထားဆိုရင် SaLaDang (ဆာလားဒယ်) ဘူတာသွားမယ်လို့ပြောပါ ရထားခက baht 40 ဝန်းကျင်လောက်ပဲကျပါလိမ့်မယ်။
4.. ရောက်ရင် မြေအောက်ရထားကနေအပေါ်တတ်ပါ ။တတ်တတ်ချင်း အထပ်သုံးဆယ်ကျော် king chulalongkong ဆေးရုံတွေ့ပါပြီ မသေချာရင် security တွေလမ်းသွားလမ်းလာမေးပါ ချုလာလွန်ကွမ်ဘယ်နားလဲဆိုတာ
5..တည်းဖို့နေရာမရှာသေးပဲ ဆေးရုံထဲအရင်ဝင်လိုက်ပါ G floor မှာ information ရှိပါတယ် မြန်မာပြည်ကလာတဲ့အကြောင်း ဆေးကုသဖို့အကြောင်း passport ပြလိုက်ပါ ။
သူတို့ဟာသူတို့ချက်ချင်းဆောင်ရွက်ပေးပါလိမ့်မယ် ။အကယ်၍ ကိူယ်ကတော်ရုံ English lanquage အခြေခံလောက်ပဲရရင် ပြောလိုက်ပါ ။မြန်မာစကားပြန်သူတို့စီစဉ်ပေးပါလိမ့်မယ် အများအားဖြင့်တော့ အစိုးရဆေးရုံမှာ စကားပြန်တစ်ရက်ငှါးခကို baht600 ပဲသတ်မှတ်ထားပါတယ်။
နေ့တိုင်းလဲငှါးစရာလဲမလိုပါ ။နောက်အကြံတစ်ခုကတော့ကိုယ့်ဖုန်းမှာ Thai, Myanmar app ကိုဒေါင်းထားရင်လဲအဆင်ပြေပါတယ်။
ကိုယ်ကလူနာကိုဆရာဝန်တွေစစ်နေတဲ့ချိန် ကိုယ်ကဆေးရုံမှာမအိပ်ချင်ဘူးဆိုရင် ဆေးရုံနားက silon road တစ်လျှောက်လမ်းလျှောက်ထွက်လေ့လာပါ….
Hotel တွေ guest house တွေအရမ်းပေါပါတယ် ။တစ်ညတည်းခိုခ baht 300 ကနေ 1500 အစားစားရှိပါတယ်။
1 baht=42 kyats ဝန်းကျင်
ဆေးရုံလိပ်စာကတော့ 1873 rama4road,Pathunwan, Bangkok 10330 Hot line ph no 022564000
ဘန်ကောက်လေဆိပ်ရောက်တာနဲ့ ချက်ချင်းထိုင်းငွေသုံးနိင်ဖို့ ရန်ကုန်ကနေမသွားခင် kbz or cb bank မှာထိုင်းငွေအနဲကျည်းကြိုလဲသွားပါ
ကိုယ်ပါသွားတဲ့ USD ကို ဖြစ်နိင်ရင်လေဆိပ်မှာမလဲတာအကောင်းဆုံးပါ လေဆိပ်မှာငွေလဲရင်လေဆိပ်ခွန်နဲ့ပိုပေးရတော့ အပြင်ဘဏ်မှာထက်ပိုရနည်းပါတယ်
ဘန်ဘောက်မှာ နေရာတိုင်း လမ်းတိုင်း ဆေးရုံတိုင်းကုန်တိုက်တိုင်းမှာ ပုဂ္ဂလိကဘဏ်ဖြစ်ဖြစ် အစိုးရဘဏ်ဖြစ်ဖြစ် USD ငွေလဲလို့ရသလို ငွေဈေးလဲအတူတူကန့်သတ်ထားပါတယ်
အကယ်၍ ကိုယ့်ရောဂါက ကင်ဆာလို လနဲ့ချီကုရမယ်ဆိုရင် ကုန်ကျမူ့ကိုလဲအတတ်နိင်ဆုံး save လိုတယ်ဆိုရင် ထိုင်းကပုဂ္ဂလိကဆေးရုံမရွေးချယ်တာအကောင်းဆုံးပါ ။
ထိုင်းမှာ အစိုးရဆေးရုံကော ဘုရင့်တော်ဝင်ဆေးရုံကော ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံကော ကုသနည်းအတူတူပါပဲ ဆရာဝန်တွေလဲအတူတူပါပဲ ထိုင်းမှာဘုရင်ကိုယ်တိုင်တောင် ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံမတတ်ဖူးပါဘူး စီရီလဒ်ဆေးရုံမှာပဲ တော်ဝင်တိုင်းကုကြပါတယ်။
ဘုရင့်သမီးတော် ချုလာဖေါင်းဆေးရုံဆိုရင် အာရှမှာသာမက ကမ္ဘာပေါ်မှာ အသိမှတ်အပြုဆုံးခံရတဲ့ ကင်ဆာဆေးရုံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဖြစ်နိင်ရင် ကင်ဆာရောဂါနဲ့ကုလိုရင် ချုလာဖေါင်းဆေးရုံChulabhorn hospital ရွေးချယ်ပါ ကင်ဆာရောဂါကိုပဲသီးသန့်ကုတဲ့ ဘုရင့်သမီးတော် ချုလာဖောင်းကိုယ်တိုင်ဖွင့်ထားတဲ့ဆေးရုံပါ
အကယ်၍ လူနာရှင်နဲ့မိသားစုဝင် ဘန်ကောက်မှာ ရက်ရှည်ကုသရမယ်ဆိုရင် ဆေးရုံနဲ့မနီးမဝေးမှာ apartment ကို ကိုယ့်ဖာသာငှါးနေပါ ရန်ကုန်ကလို ၆ လကြိုတင်နဲ့ပေးတဲ့ဥပဒေမရှိပါဘူး ။
၂ လကြိုတင်ပေးတာနဲ့ passport ရှိတာနဲ့မည်သည့်နိင်ငံသားမဆိုငှါးနေခွင့်ရှိပါတယ် ။ထိုင်နိင်ငံရဲ့ apartment တည်ဆဲဥပဒေအရ ပေ ၂၅ ပါတ်လည် aircon toilet ပါ apartment တစ်လ 4000 baht ဆိုရင် အတော့်ကိုအဆင်ပြေပါပြီ ( မြန်မာငွေနဲ့တွက်ရင် တစ်သိန်းခွဲဝန်းကျင်ပါပဲ)
လွန်ခဲ့သော ၂ နစ်ကကျတော့်မြို့ကနေရန်ကုန်ဈေးလာကုတဲ့မိတ်ဆွေ ရနိကုန်မှာ condo ငှါးတာ တစ်လ ၈ သိန်းအထက်ပေးရတဲ့ အခန်းထက် ပိုမိုသန့်ရှင်းမူ့ရှိပါသေးတယ်။
အများသုံးဓာတ်လှေကား security service ခ free ပါ။ရေခမီးခတော့ ကိုယ်သုံးသလောက်အစိုးရသတ်မှတ်နှုန်းထားတိုင်းပေးရပါ့မယ်။
တစ်ကယ်တော့ ဒီ status ကိုကျတော်ရေးဖို့ အချိန်တစ်ခုထိ စဉ်းစားရပါသေးတယ် နောက်ဆုံး ကျတော်နဲ့ကျတော့်အဖေလိုအဖြစ်ဆိုးမကြုံရလေအောင် ကြုံခဲ့ရင်ရှိလာခဲ့မယ်ဆိုရင်တောင် ရွေးချယ်စရာလမ်းရှိစေချင်လို့ ကျတော်ရေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ခဲ့ရတယ်
မသိတဲ့သူတစ်ချို့ကတော့ ကျတော့်ကိုအမြင်တမျိုးနဲ့ဆဲချင်ဆဲပါလိမ့်မယ့် ကျတော့်ကိုမကျေနပ်တဲ့သူလဲရှိပါလိမ့်မယ် သဘောထားသေးသိမ်တဲ့သူတချို့ကတော့ ကျတော့်ကိုအေးဂျင့်လိုလို အခကြေးငွေယူပြီးဆေးရုံကြော်ငှါပေးတယ်လို့မြင်ချင်မြင်လိမ့်မယ်
နောက်တစ်ချက် ထိုင်းကအစိုးရပိုင်ဆေးရုံနဲ့ တောင်ဝင်ဆေးရုံတိုင်းမှာ အေးဂျင့်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးကုသခွင့်မရှိပါဘူး ။စီးပွားရေးဆန်ဆန် နိင်ငံတကာနဲ့လဲမချိတ်ဆက်ထားပါဘူး။
ဒါပေမယ့် ဘယ်နိင်ငံသားမဆို passport ကိုင်ဆောင်ထားသူတိုင်း ထိုင်းအစိုးရဆေးရုံနဲ့ထိုင်းတော်ဝင်ဆေးရုံတိုင်းမှာ ကိုယ်တိုင်ကုသခွင့် ရှိကြပါတယ်။